एनआरएनए विश्व सम्मेलन भित्रको गुदी नबुझेका मित्रलाई मेरो जवाफ « Sansar News
१४ कार्तिक २०७४, मंगलवार ०३:५१
अस्तिको कुरा हो , अमेरिकाबाट एकजना एनआरएनएका पुराना अभियन्ताले म्यासेन्जरमा कल गरे र प्रसङ्गबस सोधे , “पत्रकार मित्र, यो पटक मैले जमुना दिदीले जित्ने अनुमान गरेर फेसबुकबाट उनकै प्रचार गरेँ, केहि महिना देखि नै अदृश्य र अघोसित रुपमा भित्रि तयारि पनि गरेका थियौं । तर, दुखको कुरा हाम्रो टिमबाट जानकी दिदी बाहेक कोहि पनि आएन । यस्तो कसरि भयो ? छोरा बिरामी भएकोले र दोकान छोड्न नमिल्दा म सम्मेलनमा जान सकिन । तपाइको विश्लेषण सुनाउनु न पिलिज !”
“………तपाइले मेरो अघिल्लो घटना र बिचारको लेख हेर्नु भएको भए प्रष्ट हुन्थ्यो । यो पटक विश्व सम्मेलनको माहोल अर्कै थियो मित्र । शेष दाइका पुराना प्रचारकहरु अहिले उनीसंग थिएनन । उनको सल्लाहकारको घेरा विश्लेषण बिहिनहरुको जमात मात्र थियो । कारण दाइको योगदानलाई भुस बनाउन गरिएको प्रयत्नबारे दुबैलाई अनुमान नभएको पनि हुन सक्छ । त्यस्तै यो पटक संस्थापक र पुर्व अध्यक्षहरुले एनआरएनएलाई जहानिया क्लब हुनबाट बचाउन हस्तक्षेप गरेकै हुन् । मेरो बिचारमा त्यो जायज हस्तक्षेप थियो । नस्लीय गन्ध र जहानियाको आरोप लागेको त्यो समीकरणको मुटुमा प्रहार गर्न जेजस्तो भूमिका अग्रजहरुले खेल्नु पर्थ्यो खेले । अब रह्यो निबर्तमान संस्थापकको अवस्था, रुचि र रहर र त्यसको बिपरित यथार्थबारे कुरो सुन्नुस है त … ” उनले बोल्ने अनुमती दिए । पंतिकार बोलि रह्यो,” …….. १३ अक्टोबरमा जमुना घलेले काठमाडौंको होटल -याडिसनबाट उम्मेदवारी घोषणा गर्दा धेरै अबिझ एनआरएनहरू आश्चर्य मानिरहे। प्रवासबाट गएका एनआरएनहरू रमिता हेर्न थाले । कसैले प्रलयको संकेत मानेर आफ्नो बचाउकोलागि मदिराको जोहो गर्न थाले भने कहिले चुनाबी रणनीतिलाई फेर्न कुनाकुनामा मिटिंग बस्न थाले । त्यहाँ त्यो दिन अमिलो रमिता भयो, नबुझ्नेको लागि अमिलो मतलब असामान्य । यो केवल नबुझ्नेकालागि रमिता थियो । बुझ्नेले यो हुने अनुमान जमुना घलेको आइसीसीमा मनोनित हुँदा नै बुझी सकेका थिए । अनि “भिजन २०-२०” अमेरिकाको सानो छिद्रबाट छिराइदा नै बुझिसकेका थिए । ति अप्रत्यासित परिघटनाहरु बकाइदा योजना अनुशार भैरहेका थिए । यो कुनै अप्रत्यासित रुपमा देखिएको योजना नभएर योजना अनुशार भएको दुस्शाहस थियो, बुझ्नु भो ? त्यसको ह्याप्पी इण्डिङ्ग भनेको पूर्ण रुपमा तयारि गरि अन्तिम अवस्थामा जमुना घलेको उमेद्वारी घोषणा गर्ने र भगवान भट्ट, कुमार पन्तलाई आपसमा भिडाएर आर्य मत विभाजन गराउने र अनार्य मत एक ढिक्का बनाउदै प्रतिस्प्र्धिहरुलाई अल्मल्याउने रणनिति अनुशार भएको थियो । त्यसपछि जमुना घलेको जितलाई सुनिश्चित गरि अधिवेशनको ह्याप्पी इण्डिङ्ग हुन सक्ने उनीहरुको आंकलन थियो । तर त्यो आशंका जीवा लामिछाने, डा.उपेन्द्र महतो र हेमराज शर्मा लगाएतका अग्रजहरुलाई थाहा थियो । त्यसैले यी सबै दृश्य अदृस्य खेलहरु उनीहरुले अरु कसैलाई नबताइकन हेरी रहे । हेरेनन् मात्र ति अस्वाभाविक जस्ता देखिने सबै दृश्यहरुलाई स्वभाविक रुपमा कसरि हल गर्ने ? योजना बनाउन थाले। उनीहरूका लागि यो अपेक्षित थियो ।
अघिल्ला दृश्यले आगामी दिशाको संकेत तर्फ़ उनीहरुले सजकता पुर्वक समाधानका अन्य योजनाबारे निचोड निकाले । उनीहरु द्वारा “कोर ग्रुप”को सल्लाहमा संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो मार्फत मतदानको दिन बिहानै घले दम्पतिलाई भेटेर लाप्राक, एनआरएन भवन लगायत घलेले सुरु गरेका परियोजनालाई बिग्रन नदिने ग्यारेन्टी गर्दै भट्टको नेतृत्वमा स्वीकार गरेर अगाडी बढ्न आग्रह गरियो । तर त्यो आग्रहलाई घले दम्पतीले सिधैं अस्वीकार गरि दिए पछि भट्ट समूहले जमुनाको समूहसँग निर्वाचनबाटै बदला लिने रणनीति बनाउनु परेको कुरा सत्य हो । कुरो बुझ्नु भो नि मित्र ? त्यसो त घले ग्रुपका युरोपबाट पुर्व सल्लाहकार र आइसीसी समेत सात जना, अमेरिकाबाट पांच जना, एसिया प्यासिफिक लगायत सबै क्षेत्रबाट गरेर उन्नाइस जनाको भूमिगत ‘जमुना जिताउ मिसन” नै खडा गरिएको थियो । त्यो तयारि अहिले नभएर जमुना घलेको आइसीसी नियुक्ति संगै अघोसित रुपमा शुरु गरिएको थियो । जसमा जनजातिहरुको बाहुल्यता भए पनि केहि अन्यको पनि सहभागिता थियो । पछिल्लो अवस्थामा गरिएको “कार्यकर्ताको दवाब स्वरुप ” उमेद्वारी घोषणा कार्यक्रम योजनाको नै एउटा भाग थियो । त्यो बारे जीवा लामिछाने, डा.उपेन्द्र महतो र हेमराज शर्मा बाहेक अरुलाई थाहा नभएकोले उताको योजनाले कोल्टे फेरे सर्वसहमतिको रुपमा भट्ट र पन्त मध्ये एउटालाई लिएर जाने र प्रतिस्प्रधा गर्नु परे अर्को पटक कुमार पन्तलाई अध्यक्षमा लैजाने गरेर भट्टलाई प्रतिस्प्रधामा लैजाने सहमति भयो । त्यो डिजाइन पनि युरोपको क्षेत्रीय सम्मेलन अगाडि नै बनेको बताइञ्छ ।
अध्यक्षका दुइ उमेद्वार पन्त र भट्टलाई मिलाउनको लागि कुमार पन्तले जर्मनको फ्रान्ग्फोर्ट सम्मेलनमा गर्न लागेको उमेद्वारी घोसणा रोक्न लगाइयो । त्यो भूमिकाको लागि यो परिस्थिति बुझेका लामिछानेले डा.उपेन्द्र महतोलाई प्रमुख सुत्रको रुपमा प्रयोग गर्दै भवन भट्टसँग अलग्गै वार्ता गरे। उनीहरूको स्पष्ट सन्देश थियो, ‘दुई उपाध्यक्षबीच सहमति नबनेमा दुवै पराजित हुने अवस्था आउँदैछ। त्यसैले यो अवस्थामा सहमति बाहेक अन्य कुनै विकल्प छैन ।’ यही सन्देश उनीहरुले अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी पन्तलाई पनि सुनाए। अन्ततः उनीहरुको प्रयासले सार्थकता पायो। दुई पक्षबीच सहमति बन्यो। पन्त उपाध्यक्षमा निरन्तरता दिन तयार देखिए, भट्ट अध्यक्षका प्रत्यासी हुने भए। त्यो अवस्थामा रुख चढ्न खोज्नेले संस्थापक र अग्रजहरुको बिश्वास गुमाए । यसकोलागि भट्टको क्याम्प फेर्न सक्ने खतरा मुख्य रुपमा थियो । उनले अन्तिम अवस्थासम्म पनि घलेको रणनीति बुझ्न नसकेका मात्र हैनन् जमुनाले अध्यक्षमा उमेद्वारी दिन्नन भन्ने मै बिस्वस्त देखिन्थे । त्यो कुरा उनले जमुनाले गरेको उमेद्वारी घोषणाको अवस्थामा मात्र बुझे, जुन कुरा संस्थापक टोलीले धेरै महिना अगाडी बुझी सकेको थियो । यो प्रतिस्प्रधाले महतो, जिबा र हेमराज बिचको सामान्य तिक्तता एकतामा बदल्न सफल रह्यो भने एनआरएनए भित्रको नश्लीय र राजकीय परम्परामा जान सक्ने आशंकालाई चकनाचुर पारिदिएको छ । तर अब एनआरएनए भित्र शेष घलेको दोश्रो कायकालबाट मौलाउदै गरेको भोट किन्ने, नश्लीय र अमंगल कोटरीको वरिपरि एनआरएन देख्ने , आर्थिक सबलताबीच मात्र संस्थाको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने र आर्थिक हैकम चलाउने प्रचलन रोक्न आवस्यक भैसकेको छ । त्यसको लागि एनसीसीहरुको पहल निर्णायक हुनेमा कसैको दुइ मत हुदैन । कि कसो हो मित्र ?” मेरो प्रश्नमा उनि निरुत्तर भए र सुनी रहे ।
अन्त्यमा मैले थापें ” यो अधिवेशनले संसारभरिका अभियन्ताहरुलाई एउटा पाठ अबस्य पढाएको छ, त्यो के भने नेतृत्व लिन मात्र जानेर अभियन्ताको प्रतिष्ठा उचो हुदैन । त्यसको लागि संगठन हस्तान्तरण गर्दा पनि ढंग पुर्याउनु आवस्यक छ । चार बर्षे कार्यकालमा घलेले उठाएको प्रतिष्ठाको अधिकांश अंश पद हस्तान्तरणमा ढंग नपुगेर दोलालघाट पुग्यो । त्यसको असरले यो पटक र पछिसम्मका उहाँहरुका धेरै सम्भावनाहरुलाई दशकौ पछाडी धकाली दिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । ” फोन गर्ने मेरा अमेरिकन अभियन्ताले “कुरो बुझें, फेरी कुरो गरौला ” भनेर ‘बाइ” गरिदिए । कुरो बुझेको भएत राम्रै हुन्थ्यो , के गरे कुन्नि !